Feysal Xiis Axmed oo ka hadlay sababta uu ku xiran yahay qoraa Siciid Maxamuud Gaheyr – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Feysal Xiis Axmed oo ka hadlay sababta uu ku xiran yahay qoraa Siciid Maxamuud Gaheyr
Iyadoo dhawaantaan magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland lagu xiray qoraa Siciid Maxamuud Gaheyr oo muddo 10 maalmood ah ciidanka dambi-baarista maamulkaasi xabsi ugu jiro, ayaa waxaa xarigiisa ka hadlay afhayeenka ciidamada booliska maamulkaas Feysal Xiis Axmed.
Afhayeen Feysal Xiis Axmed oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in qoraa Siciid Maxamuud Gaheyr xarigiisa uu ku yimid kadib markii uu xilli kasta caado ka dhigtay hadalo kicin dadweyne ah islamarkaana uusoo dhigaayay baraha bulshada uu ku leeyahay.
“Qoraa Siciid Maxamuud Gahayr waxa uu caado ka dhigtay inuu qoraalo ku faafiyo baraha bulshada uu ku leeyahay, waxaanu adeegsaday qaab kicin karta dadweynaha isaga oo uu weliba ku cel-celiyey, wuxuunu marar badan dadweynaha usoo jeediyey inay ka hor-yimadaan amarrada ay xukuumaddu bixiso gaar ahaan dhul dad dhawaan laga raray oo ku yaala agagaarka Airportka Hargeysa, iyadoo taas laga duulayo ayaa waxaa sharci noqotay in lasoo xiro, kadibna dambigiisa maxkamadda loo gudbiyo lana baaro”. Sidaasi waxaa yiri Feysal Xiis Axmed
Afhayeenka ayaa sidoo kale saxaafadda hor-keenay qoraalada uu sheegay in lagu eedeeyey Siciid, waxana uu xusay in soo qabashadiisa oo ay amarkeeda lahayd xeer ilaalinta maxakamada Hargeysa iyo talisku ay u adeegsan doonaan dacwadooda qoraaladan uu ku faafiyey baraha bulshada.
Dhinaca kale, ururada u dooda xuquuqda aadanaha iyo xisbiyada mucaaridka ah ee Somaliland ayaa xukuumadda Siilaanyo ku eedeyey xarigga qoraa Siciid Maxamuud Gaheyr, waxayna gaar ahaan eedahaas dusha ka saareen wasiirka madaxtooyada maamulka Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo ay iyagu dhinacooda sheegeen inuu qoraagu amarkiisa ku xiran yahay islamarkaana dhawaan la maxkamadeyn doono.